ILIFE H70, isicoci esingenantambo osicocileyo | Iindaba zeGajethi
ILIFE H70, isicoci esingenantambo osifunayo
URafa Rodríguez Ballesteros | 24/08/2021 18:00 | ngokubanzi, Ikhaya
Kubonakala ngathi loo "fashoni" yokuzicoca i-vacuum cleaner linyathelo nje, okanye akunjalo. Kodwa ngaxeshanye ziyadubula ezinye iintlobo zezinto zokucoca izinto ezinikezela ngamava anokuthenjwa ngakumbi zokucoca ekhaya. Kucacile ukuba ezo zinto zinkulu zokucoca iintambo ezineentambo ezinde kakhulu ziye zangena embalini. Kwaye bayazinza kwimarike izinto zokucoca ngaphandle kwentambo. Namhlanje sithetha ngayo YENZA H70.
Umxholo wezinto zokucoca kwabo bangayithembiyo into yokuba isithuthi esincinci esimbhoxo sithatha umoya kwikona nganye yendlu. Ungayichazanga i- Umahluko kumandla onokufunyanwa phakathi kwe- «conga» yohlobo lwe-vacuum cleaner kunye nesicoci esiphathwayo. Kwabaninzi, sisixhobo esingcono kakhulu sokufumana ukucocwa okucokisekileyo kwawo onke amalungu ekhaya okanye eofisini.
1 ILIFE H70 isisombululo sokucoca ekhaya
2 I-ILIFE H70 yekhaya lakho
ILIFE H70 isisombululo sokucoca ekhaya
Ukuba uthanda ukonwabela indawo ecocekileyo ekhaya kwaye unexhala lokuyicoca, kubalulekile ukuba ube noncedo kangangoko. Phakathi kwezinto ezingapheliyo esinokuzifumana namhlanje kwintengiso esiza kuthetha ngayo YENZA H70, isicoci sokucoca ngaphandle kwamacingo, ubhetyebhetye kwaye unamandla angaphezu kwamandla. Sifumana iziqwenga ezahlukeneyo kunye nezixhobo zomgangatho ngamnye kunye nendawo endlwini.
Mbambe ILIFE H70 isicoci elona xabiso libalaseleyo
Kuxhomekeke kubumdaka kunye nohlobo lomphezulu esinokuwusebenzisa Iindidi ezimbini zamandla okutsala. Amandla eqhelekileyo, eluncedo nakweyiphi na imeko ngamandla okutsala I-10 Kpa. Okanye sinokuvula imowudi buninzi Esiza kuthi ngawo sifumane amandla okutsala ngaphezulu kokuphindwe kabini nge 21 iKpa, ukuze kungabikho suntswana lothuli onokuluxhathisa.
Enkosi kuwe Imoto enamandla engenakususwa Siza kufumana onke amandla afanelekileyo ngendlela ethe cwaka. Bala kunye Isikhongozeli somdaka ekulula ukungenanto esinokufikelela kwi-1,2 yeelitha. Kwaye konke okwakhe iindawo ziyasuswa kwaye ziyahlambeka nditsho nakwindawo yokuhlamba izitya. Ubume bayo obudibeneyo kunye nesiphatho se-ergonomic busivumela ukuba siwucoce ngokugqibeleleyo umgangatho, kodwa kunye nomphezulu othe nkqo okanye iisilingi.
I-ILIFE H70 yekhaya lakho
Enye yeenkcukacha ezibalulekileyo ekufuneka sizithathele ingqalelo xa sifuna isicoci sokucoca amandla okuzimela anokukwazi ukusinika. ILIFE H70 yile ixhotywe ngebhetri ye-2500 mAh. Umthwalo oya kusivumela Ukusetyenziswa okuqhubekayo ukuya kwimizuzu engama-40 Kwindlela "yesiqhelo". Kwaye yintoni esinokuba nayo I-1% ihlawulisiwe kwakhona ngaphantsi kweeyure ezingama-5.
Los izixhobo zalo naluphi na uhlobo lokucocaa, kunye nokuthamba kweentloko zayo ezigutyungelwe zizinto ezingonakalisi ifanitshala okanye iindonga zenza ukuba ibe sesona sixhobo sigqibeleleyo. Ukujijika ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-180 kwaye izitulo okanye imilenze yetafile ayishiywanga ingahlambulukanga. Inayo ukukhanyisa ngezibane ze-LED kwezo mbombo ngokungabonakali kakuhle.
Ukuba ILIFE H70 engenacingo engenazintambo yile nto ubuyikhangela yenze eyakho ngexabiso elifanelekileyo kwiAliexpress ngaphandle kwentlawulo yokuthumela. Musa ukulinda ixesha elide ukuba indlu yakho ibonakale icocekile njengoko kufanelekile. Kwaye kunjalo esona sixhobo sokucoca ngaphandle kokuchitha ngaphezulu kweemfuneko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » ILIFE H70, isicoci esingenantambo osifunayo
I-Huawei FreeBuds 4, ukulungiswa kwemveliso ephantse yagqibelela [Ukuphonononga]